Weriye Daahir Calasow oo kasbaday dhagaha dad badan, arrimo xasaasi ahna ka warramay maanta. ( Aan wada daawanno ) | Awdalpress.com
Weriye Daahir Calasow oo kasbaday dhagaha dad badan, arrimo xasaasi ahna ka warramay maanta. ( Aan wada daawanno )
Waxa Daabacay staff-reporter on Oct 19th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Daahir Calasow waxa uu maanta innooga warramayaa arrimo badan oo aanay inteenna badani ogayn, arrimo xasaasi ah oo aan la qarin karin. Arrinta ugu daran ee maanta iyo maalmo kale uu xubin xubin uga hadli doonaa waa dhiillada iyo xasuuqa ka dhacay Muqdisho iyo sida la isaga indho tirayo dadka hagar daamada wada.
Awdalpress – London – Weriyaha lagu magacaabo Daahir Calasow oo ay dad badani u haystaan nin ku qowlaysta afkiisa, halka ay dad badan oo kale u haystaan nin xog ogaal ah oo runta ka sheega kolba waxa jira. Ayaa xilligan noqday weriye dhago badani dhegeystaan, wax-garad badanina u guuxaan waxa uu sheegayo.
Daahir maaha nin u shaqeeya dawladda Somaliya iyo maamul goboleedyada midna, waase wariye madax bannaan oo isku xil saaray in uu daaha ka faydo waxa ka qaldan Somalida amma dawladda Federaalka ah. Odhan mayno, Daahir waa nin mar walba saxane ah, balse waxa aan odhan karaynaa waa nin in badan oo ka khaldan maamullada Somalida bannaanka keena. Mar mar waxa uu la saftaa qabiilkiisa oo uu xog ogaal u yahay dulmiga ay tirsanayaan, mar marna waxa uu cod u yahay dadka aan codka lahayn amma aan hadlan karin.
Mar hore ayaan Daahir ka faallooday, oo aan dhigay meel mudanka la dhigo, waxase iga hor yimid mawjad kale oo aan rabin in uu Daahir sheego waxa qarsoon. Amma xaasid ka ah awooddiisa Ilaahay siiyey.
Ka Saxafi ahaan ( Ahmedweli Goth ) anigu waan la dhacsanahay arrimo badan oo uu Daahir Calasow uu ka hadlay amma uu la qaybsaday bulshada. Inkasta oo aan arrimo dhawr ah dhabarka u jeediyey. Waxanan Daahir u arkaa nin u baahan in aad loola shaqeeyo, inkasta oo uu haysto dad badan oo xogta iyo waxa jira ay kala warqaataan.
Maanta waxa uu innooga warramayaa arrimo badan oo aanay inteenna badani ogayn, arrimo xasaasi ah oo aan la qarin karin. Arrinta ugu daran ee maanta iyo maalmo kale uu xubin xubin uga hadli doonaa waa dhiillada iyo xasuuqa ka dhacay Muqdisho iyo sida la isaga indho tirayo dadka hagar daamada wada.
This post has been viewed 10876 times.